၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားသူနဲ့ ခိုးဝင်လာသူတွေကို စိစစ်ဖေါ်ထုတ်သွားမယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနဲ့ မြေပုံမြို့က ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း ပေါက်တောနဲ့ မြေပုံမြို့နယ်တွေမှာ ဘယ်တော့အကောင်အထည်ဖေါ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မပြောသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့အတူ ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တလျှောက်လိုက်ပါနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Derek Mitchell၊ ဆွစ်ဇာလန် သံအမတ်ကြီးတို့ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်တွေကို လူမျိုး၊ ဘာသာမခွဲခြားဘဲ အကူအညီတွေ ဆက်လက်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေက ပြောပါတယ်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်တို့အဖွဲ့ဟာ မနေ့က စစ်တွေမြို့မှာ မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး လူဦးရေ စာရင်းကောက်ခံတာကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
"ဝ" နယ်မြေ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရေး ဝန်ကြီးဦးခင်ရီ ရှင်းပြ
မလေးရှားမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ အိမ်ပြင် မထွက်ဝံ့
It is too late to say that. There is no solution because of your Gov's poor management.
Nov 13, 2013 07:38 AM
အနာတခြားဆေးတခြား ဖြစ်နေတာကြာပါပြီ။ ဖြစ်နေအုံးမှာဘဲ။ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ မျိုလွန်းအားကြိးလို့လေ။ နောက်ဂွင်အသစ်ဖွင့်လိုက်ပြန်ပြီ။